Common Mere nke Outlook PST File Nrụrụ Aka
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Common Mere nke Outlook PST File Nrụrụ Aka
Common Mere-eme ka Microsoft Outlook PST File rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi
Enwere ọtụtụ ihe ga - eme ka Faịlụ PST Outlook emerụ ma ọ bụ mebiri emebi. Anyị na-ekewa ha ụzọ abụọ, yabụ, ihe ngwaike na nke sọftụwia.
Mgbe ọ bụla ngwaike gị na-ada na ịchekwa ma ọ bụ na-ebufe data nke gị Outlook PST faịlụ, na PST faịlụ ga-emerụ emerụ. Enwere ụdị atọ:
Ndabere Ngwaọrụ Data Nchekwa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na diski diski gị nwere ụfọdụ mpaghara ọjọọ na faịlụ Outlook PST na echekwara ya na mpaghara ndị a. Mgbe ahụ ikekwe ị nwere ike ịgụ naanị akụkụ nke faịlụ PST. Ma ọ bụ data ị gụrụ ezighi ezi ma jupụta na njehie.
Ngwaọrụ IZIRingTA na-ezighi ezi. Dịka ọmụmaatụ, faịlụ Outlook PST bi na ihe nkesa netwọk, ị na-anwa ịnweta ya site na kọmputa ndị ahịa, site na njikọ netwọk. Ọ bụrụ na kaadị interface, cables, routers, hubs na ngwaọrụ ọ bụla ọzọ nke mejupụtara njikọ netwọk nwere nsogbu, mgbe ahụ ụzọ dịpụrụ adịpụ nke faịlụ PST nwere ike ime ka ọ mebie.
Odida ike. Ọ bụrụ na ọdịda ike na-eme mgbe ị na-enweta faịlụ PST, nke ahụ nwere ike ịhapụ faịlụ PST gị mebiri emebi.
E nwere ọtụtụ usoro iji gbochie ma ọ bụ belata nrụrụ faịlụ faịlụ Outlook PST n'ihi nsogbu ngwaike, dịka ọmụmaatụ, UPS nwere ike belata nsogbu nsogbu ike, yana iji ngwaọrụ ngwaike a tụkwasịrị obi nwekwara ike belata ohere nke nrụrụ data.
Nakwa ọtụtụ nrụrụ Outlook PST faịlụ na-eme n'ihi nsogbu metụtara ngwanrọ.
Ezighi ezi Sistem Iweghachite. May nwere ike ịchọpụta na ọ bụ ihe a na-ekweghị ekwe na usoro mgbake faịlụ nwere ike ime ka nrụrụ faịlụ PST. Mana n'eziokwu, mgbe ụfọdụ, mgbe faịlụ faịlụ gị mebiri, ị na-anwa ịkwụ ụgwọ ngwaọrụ mgbake data ma ọ bụ ọkachamara iji weghachite faịlụ PST na ya, faịlụ ndị enwetara nwere ike ịbụ ndị rụrụ arụ, n'ihi:
N'ihi ọdachi faịlụ faịlụ, ụfọdụ akụkụ nke faịlụ PST mbụ bụ lost na-adịgide adịgide, ma ọ bụ na-edegharị ya site na data mkpofu, nke na-eme ka faịlụ PST ikpeazụ ewepụtaghị ma ọ bụ nwee data ezighi ezi.
Ngwaọrụ mgbake ma ọ bụ ọkachamara enweghị ọrụ zuru oke na ya / ọ nwere ike ịnakọta ụfọdụ mkpofu data ma chekwaa ha dị ka faịlụ nwere mgbatị .PST. Dị ka faịlụ ndị a na-akpọ .PST enweghị data ọ bụla dị irè nke faịlụ Outlook, ha abaghị uru ọ bụla.
Ngwaọrụ mgbake ma ọ bụ ọkachamara ahụ achịkọtala data data ziri ezi maka faịlụ PST, mana ejikọtaghị ha n'usoro ziri ezi, nke na-emekwa ka faịlụ PST ikpeazụ ewepụtaghị arụ ọrụ.
Ya mere, mgbe ọdachi usoro faịlụ dị, ị ga-achọta ezigbo data mgbake ngwá ọrụ / ọkachamara iji weghachite faịlụ PST gị. Ngwá ọrụ / ọkachamara ọjọọ ga-eme ka ọnọdụ ka njọ karịa ka mma.
Nje Virus ma ọ bụ sọftụwia ọjọọ ọzọ. Ọtụtụ nje ga-emetụta ma mebie faịlụ Outlook PST ma ọ bụ mee ka ọ ghara inweta ha. Ọ na-ukwuu tụrụ aro ka ịwụnye mma mgbochi nje software gị Outlook email usoro.
Kwụsị Outlook na-adịghị mma. Na ọnọdụ nkịtị, ịkwesịrị ịkwụsị Outlook n'ụzọ dị mma site na ịchekwa mgbanwe gị niile na faịlụ PST wee pịa "Ọpụpụ" ma ọ bụ ihe mmechi menu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na emechiri Outlook n’ụzọ na-ezighi ezi mgbe ị na-emepe ma na-enweta faịlụ PST, mgbe ahụ PST faịlụ na-adịkarị njọ ma ọ bụ mebie. Nke a nwere ike ime ma ọ bụrụ na ike ọdịda a kpọtụrụ aha n’elu emee, ma ọ bụ ọ bụrụ na Outlook na-arụ ọrụ n’ime ihe ma ị kwụsị ya site na ịpị “Ọgwụgwụ Task” na Windows Task Manager, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị gbanyụọ kọmputa ahụ na-enweghị ịkwụsị Outlook na Windows.
Erughị eru na mmemme Outlook. Mmemme ọ bụla nwere erughị eru, ya mere Outlook. Deficfọdụ adịghị ike sitere na obere nlele nke ndị na-emepụta ihe. Enwere ike ịtụ anya ha mana enweghị ike idozi ya naanị site na mmezi ma ọ bụ akara. Iji maa atụ, na mbido, ndị nrụpụta Microsoft anaghị ekwenye na a ga-enwe ọtụtụ data na faịlụ PST, yabụ nha faịlụ PST kachasị maka Outlook 97 ruo 2002 bụ 2GB site na imewe. Ma ugbu a, nkwukọrịta na ozi nkeonwe na-eto ngwa ngwa nke na faịlụ PST na-abawanye nke ukwuu. Mgbe faịlụ PST na-abịaru nso ma ọ bụ gafee 2GB, ọ ga-emerụ emerụ. Ọ bụ ezie na adịghị ike ndị ọzọ na-esite na akpachapụghị anya nke ndị mmemme. Ke ofụri ofụri, ha na-apụghị na-atụ anya ma ozugbo hụrụ, nwere ike idozi obere fixes ma ọ bụ patches. Iji maa atụ, mgbe Outlook zutere mmejọ a na-atụghị anya ya, ọ ga-asị “Microsoft Outlook ezutewo nsogbu ma chọọ imechi. Anyị nwute maka nsogbu ahụ.”Ma kwụsị n’ ụzọ na-ezighi ezi, nke nwere ike imebi faịlụ PST.
Mgbaàmà nke rụrụ arụ PST faịlụ:
Maka amaokwu gị, anyị anakọtara ndepụta nke njehie na nsogbu nkịtị mgbe ị na-eji Outlook , nke gụnyere ihe mgbaàmà mgbe faịlụ PST na-emerụ emerụ.
Idozi faịlụ rụrụ arụ PST:
Nwere ike iji ngwaahịa anyị na-emeri DataNumen Outlook Repair na weghachite faịlụ rụrụ arụ nke Outlook PST.